SEO အတွက် အခြေခံသိထားသင့်တဲ့ အချက်များ -
မိတ်ဆွေ….သင်ဟာSEO အကြောင်းကိုလေ့လာနေတဲ့သူတစ်ယောက်လား? ဒါမှမဟုတ် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် SEO ကိုအသုံးပြုဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်လား? SEO နဲ့မရင်းနှီးသေလို့ ခေါင်းရှုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြပေးမယ့် Beginner တွေအတွက် 2019 SEO Ranking Tip တွေက သင့်အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမယ့်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Tip တွေကို မဖော်ပြခင်မှာ SEO ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို အရင်ဖော်ပြပေးပါမယ်။ SEO ရဲ့အရှည်ကောက်ကို Search Engine Optimization လို့ခေါ်ပြီး Digital Marketing နယ်ပယ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Internet Marketing နည်းလမ်း တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ SEO ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Website ကို Google (Search Engine) ရဲ့ထိပ်ဆုံးစာမျက်နှာမှာ ရောက်ရှိစေပြီး Website ကိုလူကြည့်ရှုမှု များအောင်ပြုလုပ်တဲ့ နည်းလမ်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ SEO ကရရှိတဲ့ Traffic ကလည်း Search Engine က Free ရရှိတာဖြစ်တဲ့ အတွက် Long Term အတွက် ကုန်ကျမှုသက်သာပြီး Website Ranking တက်စေဖို့အတွက် အလွန်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ Search Engine Advertising နည်းလမ်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Beginner တွေအနေနဲ့ သိထားသင့်တဲ့ 2019 SEO Ranking Tip တွေကတော့…
Meta Tag ထဲက Title နဲ့ Description တွေကို SEO အတွက်သင့်လျော်မယ့် Keyword တွေကို ရွေးချယ်ပေးပါ
Mobile View မှာ Responsive ဖြစ်ဖို့ အတွက် အထူး ဂရုစိုက်ပေးပါ
Content တွေနဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး Quality ကောင်းတဲ့ Image တွေကို သုံးပေးပါ
Google Search Engine က သင့် Website URL တွေကို တစ်စုထဲရှိကြောင်းသိအောင် Sitemap ထည့်ပေးပါ
Search Engine က Content အသစ်တွေကို ပိုအသားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သင့်ရဲ့ Website က
Blog တွေကို အမြဲ Update ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါ
Search Engine က Fresh Content တွေကို ပိုပြီးကြိုက်တဲ့ အတွက် SEO နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Content တွေကို Update အမြဲလုပ်ပေးပါ
ယခု ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ Tip တွေကတော့ အခုမှ SEO ကိုလေ့လာနေတဲ့ Beginner တွေအတွက် သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံ Tip တွေလိုလဲ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အခုလို Digital Marketing နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ထပ်မံ ဝေမျှပေးသွားပါအုံးမယ်။
Posted by Min Thuta/ Monday December 9th, 2019/ Blog/0Comment